Tonizia: Nosamborina indray ilay mpanao gazety sady bilaogera Abdallah Zouari · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2019 8:44 GMT
Nosamborin’ireo polisy manao fanamiana sivily omaly, 15 Septambra 2009 tao an-tanànan'i Zarzis ao atsimo, ilay bilaogera Toniziana sady gadra politika teo aloha Abdallah Zouari.
Nandritra ny fisamborana adiny 8, nasaina hilaza ny teny miafin'ny kaonty mailakany i Abdallah Zouari ary nohadihadiana momba ny tatitra farany indrindra navoakany omalin'io mialoha ny fandraràna ny tranonkala Tunisnews.
Nohadihadiana momba ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Zon'olombelona nitsidika azy tao anatin'ny ito taona sy ny resadresaka niarahany tamimn'ny media i Zouari. Nampitandremana i Zouari mba tsy hanao fanambarana mety handoto ny endrik'i Tonizia, na manao fanentanana manaratsy ahafahan-dry zareo manenjika azy ho nanapariaka lahatsary vetaveta sandoka hanaratsy ny lazany
Hatramin'ny namotsorana azy tamin'ny taona 2002, rehefa avy nigadra 11 taona an-tranomaizina, mbola migadra any amin'ny trano ambenana any amin'ny distrika ambanivohitra, 500 kilaometatra miala ny tranon'ny fianakaviany ao Tunis Atoa Zouari, na dia teo aza ny didim-pitsarana navoaka tamin'ny 2 Aogositra 2009 izay namarana ny fanagadrana fito taona amin'ny trano ambenana.
Eo ambany fanarahamason'ny polisy hatrany Atoa Zouari, tsy mahazo miditra aterineto ary voaràra tsy hampiasa cybercafe eo an-toerana. Nosamborina imbetsaka izy noho ny fanoherana ny fandraràna sy ny fampijaliana ary noho ny fifandraisana amin'ny tontolo ivelany amin'ny alalan'ny aterineto.
Mibilaogy ao amin'ny Citizen Zouari i Abdallah Zouari?. Anisan'ireo bilaogy mpanakiana hafa am-polony izay nakatona tao Tonizia ny bilaoginy.